Kedu ihe kpatara Ihe Mere eji Emega Ahụ Ga - eji Kwụsị Ihe - OMG Solutions
Ihe Mere -kwụ Egwuregwu Ahụ-Igwe Ọdụ Azụghị Ihe Dị Elu
Mgbe ole Anyị na-anwa ịchọta ụzọ isi dozie nsogbu nke ime ihe ike nke ndị uwe ojii megide ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ojii, igwefoto ndị uwe ojii na-eyi uwe na-apụta dị ka ndị na-eweta nsogbu iji mee ka ndị mmadụ lebara anya ma nyere aka wulite ntụkwasị obi obodo. Ndị mmadụ na-atụ anya igwefoto ndị a dị ka akụkụ dị mkpa nke ngwọta.
Ndị uwe ojii Sacramento gburu Stephen Clark, onye Africa-America n’azụ ụlọ nne nne ya. Ngagharị iwe malitere mgbe o gbuchara ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii bụ ihe ha chere na Clark jikere. Mana ndị uwe ojii ahụghị ngwa ọgụ ọ bụla dị nso na onye ahụ nwụrụ ma e wezụga ekwentị. Onye isi ndị uwe ojii obodo ahụ gbara mbọ ịzaghachi ndị ngagharị iwe ahụ site na mpempe igwe Onyonyo Worn Camera. Onye uwe ojii ahụ choro iberibe igwefoto ahu. Ọ chọrọ ịmata ọdịiche dị n'etiti ọha na eze. Mana ọ bụ ihe nwute, o yighị ka nsogbu ahụ ọ ga - edozi. Ihe niile dị n'ime ya bụ ihe na-edoghị anya.
Ihe a merenụ na-egosi na Camerakwụ Igwefoto Adịghị ntụkwasị obi kpamkpam maka idozi nsogbu. Nnyocha nke ndị ọkà mmụta akparamàgwà na-elekwasị anya n'ihe iwu kwadoro nke njehie ncheta. Nnyocha nke ndị ọkà mmụta iwu na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-enye echiche na igwefoto ahụ nwere eyi nwere ike ọ gaghị enye nsonaazụ achọrọ na ezigbo ngwọta maka akparamagwa ndị uwe ojii.
Enwere atụmanya n'etiti ọha na eze na igwefoto ahụ yiiri uwe ga-egosi n'ụzọ doro anya ihe mere na ihe ọghọm ndị metụtara ndị uwe ojii na ndị nkịtị. Ọha na-atụ anya igwefoto ahụ nwere eyi ga-eme ka iwelata akụkọ ndị uwe ojii na ụmụ amaala ji nwayọọ nwayọọ karịa maka ihe mere n'oge ọnwụ ma ọ bụ ọnwụ. Olile anya a kpaliri gọọmentị obodo na gọọmentị etiti emefu nde kwuru nde na -ewepu igwefoto ahụ na-ahụ maka ọfụma. N’ikwu ya, ndị mmadụ tụkwasịrị obi n’ihe ha hụrụ. Ha chere na vidiyo ahụ nwere ike ịbụ ọgwụgwọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ nkwukọrịta dị n'etiti ndị uwe ojii na ụmụ amaala na-ebute ike karịrị akarị.
Mana ndị ọkachamara nke gbasara akparamaagwa na-atụ aro na e nwere opekata mpe atọ ihe kpatara igwefoto ahụ agaghị enye ebumnuche ndị mmadụ chọrọ.
Ihe mbu kpatara bụ mmachi nke igwefoto ahụ na-eyi. Cameraskwụ nke igwefoto Ahụ na-enyekarị ihe amachiri ihe mere. Ihe ndị mmadụ na - ahụkarị na - edo edo, n'ihi na igwefoto ọfụma n'ogo uwe elu ya na uwe ndị uwe ojii. Ihe mgbochi ọzọ bụ ihe mgbochi gburugburu ebe obibi na oghere igwefoto nwere mmetụta na fim ahụ. Ihe kachasị mkpa, ndị mmadụ na-ahụ mkpali na-edoghị anya n'ụzọ kwekọrọ na nkwenye na mmasị ha.
Omume ndị mmadụ banyere ndị uwe ojii na-emetụta ihe ha hụrụ n'usoro ndị uwe ojii. Iji maa atụ, mgbe ndị mmadụ kiriri vidio nke onye uwe ojii na-eme ka ya na nwa amaala na-emekọ ihe, ndị natara ndụmọdụ lebara onye uwe ojii ahụ anya na ndị ha na ndị uwe ojii na-ekwu, ha kọọrọ na ha chere na ndị uwe ojii nwere otu ụkpụrụ otu ma ọ bụ nwee otu agbụrụ. -gulee ihe onye ọrụ ahụ mere ka amabeghị ya.
Ndị a na-atụkwa aro ịkwado onye uwe ojii nro nro karịa ndị mmadụ na-elekwasị anya na onye uwe ojii mana ọ naghị etinye ndị uwe ojii. Yabụ, ọ bụrụ na ntụkwasị obi ndị uwe ojii ma kwenye n ’ịke ndị uwe ojii, ị ga-ahụ omume ha dịka nke ziri ezi karịa.
Nke abụọ, eziokwu ahụ igwefoto ahụ na-eyi egosighi onye uwe ojii ọ pụtara na ndị mmadụ ga-elekwasị anya naanị n'omume na omume onye nkịtị. Nke ahụ nwere ike rụpụta ezigbo ihe. Iji maa atụ, mgbe ndị uwe ojii na-agba ajụjụ ọnụ, mgbe igwefoto na-eduzi naanị onye a na-enyo enyo, ndị mmadụ na-agbada iji belata ọrụ onye ọrụ nyocha ahụ. Kama nke ahụ, mgbe ha hụrụ onye uwe ojii, ha ga-eche maka etu esi agba ajụjụ ịgba ajụjụ nwere ike bụrụ ma nwekwuo ọmịiko n'ebe onye a na-enyo enyo nọ. Nke a pụtara na igwe elele igwefoto na-emegharị ihe ndị mmadụ lekwasịrị anya.
Eziokwu ọzọ a na-ahụ anya bụ igwefoto ahụ na-elekwasị anya na ndị nkịtị, ndị mmadụ nwere ike ileghara ozi ndị isi gbasara ọrụ onye uwe ojii anya na nzute ahụ. N’ezie, ụfọdụ ihe akaebe na-egosi na iji igwefoto kpuchie uwe ndị uwe ojii nwere ike ị nweta eserese dị iche iche karịa igwefoto ahụ mere, na-eduga na nkwubi okwu dị iche iche banyere ihe ihe osise a na-egosi.
Nke atọ, ụzọ ndị mmadụ si agakwuru ndị uwe ojii emetụtaghị etu ha si akọwa omume ndị uwe ojii na ndekọ vidiyo. Approzọ ndị ahụ na-emetụtakwa ihe ha na-echeta ịhụ na vidiyo kamera ahụ. Anyị achọpụtala na ndị mmadụ nwere mmasị na ndị uwe ojii yikarịrị ka hà na-ejide mkpesa onye uwe ojii iji mara ihe ha hụrụ na foto igwefoto ahụ.
Ha kọtụrụ, na ndị nkịtị nọ na vidiyo ahụ na-eji mma eme n'agbanyeghị na ọ nweghị mma dị na vidiyo ahụ n'ihi na onye uwe ojii ahụ kwuru na ọ hụrụ mma. Ndị lere vidio ahụ na-anwa ime ka ọgụgụ isi nke ndị ọrụ uwe ojii machibido iwu ahụ site na iji ozi ha mụta na mbụ, n'agbanyeghị na ọ daghị na ndekọ vidiyo ahụ.
Na isi, akụkọ onye uwe ojii ahụ rụrụ ọrụ dị ka isi iyi nke na-eduhie eduhie, ọ bụkwa ihe ndị mmadụ chetara ịhụ. N’echeghi, nyocha banyere mmetụta na-adịghị mma dịka nke a na-egosi na ha enweghị ike idozi ha, ọbụlagodi, mgbe a dọrọ ndị mmadụ aka na ntị na ozi ezighi ezi ma ọ bụ enyere ha nkọwa maka ihe kpatara njehie ahụ ji mee.
Akụkụ ndị a niile agaghị enwe nsogbu ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ekweta n ’echiche ọjọọ ha ma mezie ya. Ma, ha anaghị eme ya.
Dịka onye nnọchi anya, ndị mmadụ kwenyere na ihe ha hụrụ ma cheta bụ ihe nnọchiteanya zuru oke nke ụwa, ọbụlagodi na ihe ha hụrụ ma cheta ezighi ezi.
N’aka ọfụma, ndị mmadụ kwenyere na mgbanye ugwu na mmata na ncheta ndị ọzọ ga-ebelata ikike nke ndị ọzọ nwere ịbụ ndị nlere anya na-ahụ maka vidiyo ndị uwe ojii. Mana ndị mmadụ na-eche na ha nwere ike itinye echiche nke onwe ha iche. Akwukwo ndi mmadu gosiputara na nkwenye a ezighi ezi ma nwee ike imebi ikike ichebara echiche.
Camerakwụ igwefoto ahụ bara ezigbo uru n'ihi na ọ ga - echekwa ma ndị ọrụ uwe ojii ma ndị nkịtị ka ebubo ụgha. Agbanyeghị, nlepụ anya ndị mmadụ na anya na ebe nchekwa nwere ike ịpụta mgbe ihe na-edozighi anya ma ndị mmadụ atụkwasị obi na ebumnobi ha.
Yabụ, igwefoto a na-egosi onyoonyo bụ naanị ihe ga - eme ka emezi mmekọrịta ndị uwe ojii na mpaghara. Usoro ikpe ikpe ga-agbasi mgba ike etu esi edozi nsogbu ndị a.
Tupu m mechie isiokwu anyị ga-eweta nyocha site na The Center for Evidence-based Crime Policy na George Mason University. Ha bipụtara nyocha ahụ n'akwụkwọ akụkọ Criminology & Public Policy. Ọ bụ nchọpụta miri emi banyere igwefoto a na-eyi n'ahụ. O wetara ọtụtụ ihe na-emeghe anya. Ndị nchọpụta chọpụtara na kamera ndị a na-eyi n'ahụ bụ ihe na-agbanwe omume nke ndị uwe ojii maka mmetụta ka mma n'oge ọdachi ahụ. Mgbe onye uwe ojii chere na ha nọ na onyunyo igwefoto ha na-amalite ịgwọ nwa amaala na ụzọ mmepeanya. N'ọtụtụ ngalaba, kamera enwebeghị mmetụta a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụ nke dị mkpa n'echiche nwa amaala nke ndị uwe ojii.
Nnyocha ahụ bụ ihe kachasị ọhụrụ ịchọpụta na igwefoto ahụ bụ ihe bara uru na ọnọdụ ụfọdụ mana mmadụ ekwesịghị ịtụ anya na ọ dị mkpa aka na akaụntụ.
Ndị ọrụ nyocha ahụ rụtụrụ aka na ọmụmụ ahụ ahụghị ntaramahụhụ nke mkpesa ọha. Ọmụmụ ihe ahụ gosikwara na ndị uwe ojii malitere enweghị mmasị na igwefoto ahụ nke ọma mgbe ngalaba ndị uwe ojii nabatara kamera eyi. Mmemme igwefoto mebiwo ihe ndọghachi azụ n'ọrụ ndị uwe ojii na ụba na egwu na arụ ọrụ n'etiti ha.
Enwere echiche ọzọ n’etiti ndị nyocha ahụ. Ha chọpụtara akụkụ ọzọ nke ọmụmụ ha na ndị uwe ojii yi kamera na-enweta mkpesa ole na ole. Ọ nwere ike na-atụ aro na igwefoto ndị ahụ na-agbanwe omume onye ọrụ n'ụzọ belatara arụmọrụ na-adịghị mma ebe dịka echiche mbụ nke igwefoto anaghị emetụta ọnụ ọgụgụ ndị uwe ojii. Echiche mbụ nwere arụmụka na nkwenye karịa.
Dika ihe si na nyocha a puta, igwefoto ndi mere ahu emeghi ka ihe o bula mee ihe iji wee mee onodu oru na ndi uwe ojii ma obu mee ka nkwalite odi nkpa na uche mmadu maka ngalaba a nabatara ha.
Ndị nyocha Mason kwukwara na ụfọdụ nkatọ dị ukwuu nke igwefoto eyi mmadụ mere na ha ga-eme ka mbelata ọrụ ma ọ bụ mmegharị ndị uwe ojii. Nkwupụta a na-atụ aro na ụfọdụ ngalaba igwefoto mere ka mmekọrịta na-esiri ndị uwe ojii na ụmụ amaala ahụ sie ike karịchaa ma ọ bụrụ na ụmụ amaala na-atụ anya iji igwefoto mee ka ndị uwe ojii na-emekwuwanye mmezi ndị uwe ojii mana ndị isi na-eji igwefoto dị elu ịba ụba na ụmụ amaala.
Departmentfọdụ ngalaba ekwupụtala na ha ga-akwụsị ma ọ bụ laa azụ ịmalite mmemme igwefoto n'ihi oke ụgwọ, mgbasa ngwa ngwa nke igwe mmadụ na-ekwu na ọtụtụ ngalaba ga-aga n'ihu na-eji teknụzụ ahụ. Mana a ka nwere nnukwu nsogbu gbasara etu ha nwere ike isi jiri igwe onyonyo mmadụ mee ihe, ọkachasị ma a bịa na onye nwere ike ị nweta ihe onyonyo igwe mmadụ, mgbe mgbe ndị uwe ojii na-ezochi eziokwu site n'aka ndị nkịtị ma ghara ikwe ka ha hụ omume ọjọọ nke ndị uwe ojii.
Ọ pụtara na nyocha a na-aga n'ihu na-ata ahụhụ ihe omume mmemme igwefoto na-enwe, oleekwa otu usoro na ngalaba ndị uwe ojii nyere na-esi enwe ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda ha?
Maazị Christopher S. Koper, onye Prọfesọ Mason na onye na-edekọ akụkọ ahụ kọwara na maka iwelie mmetụta dị mma nke igwefoto ahụ nwere, anyị na-atụ aro itinye uche na ụzọ na ọnọdụ-nzukọ na obodo-nke ngwaọrụ ndị kachasị baa uru ma ọ bụ na-emebi.
Ngalaba ndị uwe ojii kwesịrị ị attentiona ntị n'otu esi eji igwefoto na ọzụzụ ndị uwe ojii, njikwa, na nyocha nke ime iji melite arụmọrụ ndị uwe ojii, ịza ajụjụ, na iwu obodo.
Nzuzo 6468 2 Echiche Taa